YAHYA SWISS TOURNAMENT YAHYA CUP
Waxaa Maalintu bishu ahayd 10 November lagu qabtay Magaalada Villars, eee ku taala duleedka magaalda Geneve ee dalka Switzerland, xaflad aad looga soo agaasimay oo lagu gudoonsiiyay Koob loogu mgacdaray marxuun Abdulkadir Yahya Ali oo lagu xusaayay dadaalkii nabadeed ee uu dalka Somaliya ka sameeyay.
Xafladaas oo ay ka soo qaybgaleen masuuliyeen sar sare, waxaa la gudoonsiiyay Koobka Madaxweynihii hore ee Findland, Martti Ahtisaari, Ahna Gudoomhaiya Hayada WSP International oo iyadu la mataanaysan haadii Abdulqadir uu ka shaeeyn jiray ee CRD (Xarunta Cilmibaarista iyo Wadatashiga), fadhigeeduna Yahay Magaalada Mogadishu.
Sidoo kale waxaa xafladas ka soo qaybgalay jooganayna madaxa Hayadda WSP International Scott M. Weber iyo masuuliyiin uu ka mid Jonathan Moore, oo ah Safiirkii hore ee dowlada Maraykan u joogi jiray United Nations, Mathias Stiefel iyo masuuliyeen kale oo ka kala socday wadamada Europe.
Xafladaas waxaa sidooo kale joogay Qaar ka mid ah jaaliyada Somaliyeed ee ku dhaqan dalka Switzerland, oo iyagu gudoonsiiyay Koobka masuiliyiinta hayada WSP International. Waxaa iyagna goob joog ka ahaa xafladaas Jabril Ibrahim Abdulle iyo Hassan Shiekh Mohamoud oo ka tirsan Hayadda CRD, iyo A/rahman Osman Raghe, Shuki, Ali Farah, Boobe, Gees..
Waxaa halkaas qudbado ka jeediyay qaar ka mid ah jaaliya Somaliyeed iyo masuuliyiinta hayadda WSP International
Jaaliyadda Somaliyeed waxaa ay balan qaaday in tartankaani uu ahaan doono mid joogto ah oo sanadkastaa lagu xusi doono Abulkqaadir Yayya Ali. Kooxihii ka soo qayb galay tartanka oo ka kala yihim gobolo kala duwan ee dalka Switzerland, waxaa ku guulaysaty Koobka kooxdii ka socotay Magaalada ZURICH.
Waxaana sanadka soo socda ka qaybgali doono tartanka lagu xusayo howl-qabadkii Abdulqaadir Yahya Ali kooxo matalaya dhamaan gobolda uu ka kooban yahay dalka Switzerland iyo Waxaa halkaas mahad celin weyn looga jeediyay dhamaan dhalinyarii is xilqaantay ee soo qaban qaabisan tartankaan, hayaada CRDna waxaa ay balan qaaday in sii wadi doonto hoowshii Abdulqadir Yahya Ali uu u dhintay. Shumacii uu shidayna uu shidnaan doono inta Somaliya nabadii uu taamayay ay dib ugu soo noqoto.
Cidii u baahan faahfaahin dheeraada waxaa ay la xiriiri karaan Weerrow oo laga helo: +41-79 721 76 20 ama Mohamed Wali oo laga helo +41 79-613 9347.
Sawirada Waxaa qaaday Ryan Anson, Freelance Photographer